May Nyane: မြသီလာ(၁၉)
၉၂ ကကျွန်တော် လေထန်ကုန်းစထိုင်တတ်စအချိန်ပေါ့။ ထိုင်ရင်းနဲ့ ဆရာတွေရဲ့မျက်နှာတွေ မဂ္ဂဇင်းမှာ မြင်ဖူးတာတွေနဲ့ တိုက်ကြည့်၊ ဘေးဝိုင်းကပြောတာတွေ လိုက်နားထောင်၊ လွမ်းတယ်ဆရာမရာ။
ဗိုလ်မှူးကြီးရဲထွဋ် အကြောင်းဖတ်လိုက်ရတာ အားရလိုက်တာ ဆရာမရယ်။
ကျနော်တို့ စတုတ္ထနှစ်ကျောင်းသားဘ၀က ကစလ(၁) မှာ ကွင်းဆင်းတုန်းကလည်း အဲသည်တုန်းက ဒုဝန်ကြီး လာပြီး လက်ချာပေးတယ်။ နာမည်က ဦးစောလွင်လား...ဦးစောထွန်းလား သေချာတောင် မမှတ်မိပါဘူး။
နအဖ ပေါ်လစီတွေကု အမြင်ကပ်လောက်အောင် အလုံးလိုက်ပြောတယ်။ ပြောပုံက လုံးဝအဆင့်မရှိဘူး။ ဆရာမပြောတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးရဲထွဋ်နဲ့ နင်လားငါလားပဲ။ ကျောင်းသားအားလုံးက နားထောင်ရင်း ညှိမထားရဘဲ မျက်မုန်းကျိုးနေတော့တာပေါ့။ တနေရာရောက်တော့ မြင်ကွန်း၊ မြင်းခုံတိုင် မင်းသားတွေအကြောင်းပြောရင်း ရှင်ဘုရင်သေတာကို နတ်ရွာစံတယ်လို့ ပြောရမယ့်အစား ပျံလွန်တော်မူတယ်လို့လည်း မှားပြောရော ကျနော်တို့တွေအားလုံး အမြင်ကပ်ကပ်နဲ့ ၀ိုင်းဟားကြတာ တင်းပြီး ပြန်သွားရော။
မော်ကွန်းတိုက်လူကြီးဆိုတဲ့သူ ပြောတဲ့စကားတွေ ဖတ်တာ ရွံလိုက်တာ၊ အံ့တော့မသြပါ။ ဒါမျိုးသင်ကြားပေးတဲ့သူတွေ ရှိလို့လဲ။ သူတို့ကို အမွေဆက်ခံသူတွေ အွန်လိုင်းမှာ တွေ့နေရတာပါ။ တပ်ကသူ အများစုက ဗိုလ်ချုပ်ကို လေးစားကြပေမယ့်၊ စုန်းပြူးတွေလဲ မနည်းပါဘူး။
ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကျဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ အာဇာနည်နေ့ ဟာ မကောင်းတတ်လို့ တင်ထားတဲ့ သမိုင်းလို့ ပြောတဲ့လူတွေ ဦးစီးထုတ်မယ့်ထားတဲ့သမိုင်းပြင် စာအုပ် ကြီး မြန်မြန် ထွက်လာစေချင်တယ်။
ဒါဆို ပွဲက သိပ်ကြည့်ကောင်းမယ်..သေချာတယ်..
သြဂုတ်လ ၂၄ မှာဖွင့်မယ့်ကျောင်းကို အမရဲ့ မြသီလာ (၂၀)မှာ ပြန်လိုက်တက်ဦးမယ်..
အဲဒီစာအုပ်ထုတ်တော့ ရှင် ကျုပ်ကို လက်ဆောင်ပေးသေးတယ်.. အခုမှ မှတ်မိလာပြီ...
မနော်.. ရေစက်ဆိုတာဖြစ်မယ်. အမြဲဆက်စပ်ပတ်သက်နေကြရတဲ့ အ၀န်းအ၀ိုင်းလေး။
ကိုပေါရေ.. ကျမကတော့ အဲလို ငါတကောကောတွေကို တနည်းနည်းနဲ့ ပြန် တုံ့ပြန်ရမှာပဲလို့ သတ်မှတ်ထားတယ်။
ဟုတ်တာပေါ့ ငထက်ရယ်.. ဗိုလ်ချုပ်ကို ချစ်တာက အများစုပါ။
ကမောင်ရင်နော်.. ကျောင်းဖွင့်ရက်မှားပီးတက်ရင်တော့ ကျောင်းဖွင့်ရက် confirm လုပ်တဲ့သူ အပြစ်ပဲ ...ဟဲဟဲ။
သယ်ရင်း.. လာဦးမည်... မျှော်..။
အဲဒီလူတွေ (စစ်ဗိုလ်တွေ) ဘာလို့ အဲလောက် မိုက်ရိုင်းနေကြ ဆင်ခြင်တုံးတရားကင်းမဲ့နေကြတာလဲ။ စစ်တပ်ကိုသိမ်းကြုံးဆဲဆိုတာမျိုးမလုပ်ချင်ပေမယ့် အဲဒီလူတွေထဲက မြင်ဖူးကြားဖူးသမျှ အများစုဟာ အဲလို တလွဲ အမြင်တွေနဲ့ မိုက်ရိုင်းစော်ကား မောက်မာကြသူတွေချည်းဖြစ်နေတော့ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးကို ဘယ်သူက အကောင်းပြောချင်မလဲ? စစ်တပ်ကို confront လုပ်မယ် sanction ကိုထောက်ခံမယ်ရယ်လို့ ဒေါ်စုစပီးမပြောခင် ၁၉၈၉ လောက်ကတည်းကကကို အနယ်နယ်ကို စည်းရုံးရေး ဆင်းတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ စစ်နယ်မြေက တိုင်းမှုးတွေ အရာရှိတွေ ညစ်စုတ်ပဲ့ကြ၊ အောက်တန်းကျကြတာလဲ အဲဒီစစ်တပ်ပဲ? အမှန်က သူတို့ကိုပဲ မွမ်းမံသင်တန်းပြန်ပေးပီး လူစိတ်တွေပြန်ရှိလာအောင် သင်ပေးရမှာ... (စကားမစပ်၊ ပါရဂူ Ph.D ဆိုတဲ့ academic ဆိုင်ရာ ဘွဲ့အကြောင်း သေချာနားမလည် တန်ဖိုးမထားတဲ့ သူတွေမို့လို့ သူတို့ကိုယ်တိုင်လဲ ပေါပေါလောလော Ph.D တွေးမွေးထုတ်ချပီး ဘာမှသုံးစားမရလောက်တဲ့ ပညာရေးစနစ်ဖြစ်လာတာပဲ)
it makes my blood boil >:(
ပညာရှင်နဲ့ အာဏာရှင် တို့ရဲ့ ပညာခန်းလေးတွေ ဖတ်ရတာ အားရတယ် ဆရာမ။ သူတို့မှာ ဘာလုပ်လုပ် ဟားစရာကို ဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။
ဆရာမ ဒီမြသီလာကို စာအုပ်အဖြစ် လုပ်သင့်ပါတယ်။
မြသီလာက မြသီလာသက်သက်မဟုတ်တဲ့ ထူးခြားတဲ့မြသီလာပါ…
မြသီလာက မြသီလာတင်မကတဲ့ လေးနက်တဲ့မြသီလာပါ…
မြသီလာက မြသီလာထက်ပိုတဲ့ ကြီးမြတ်တဲ့မြသီလာပါ…
I just want to comment about this PhD section that you have mentioned..
Here are the some of the common requirements for PhD degree.
1. Successfully completingacertain number of additional, advanced courses relevant to his/her area of specialization.
2. Student must submitathesis or dissertation independent of his/her own finding or topic of the choice that panel had approved prior to submitting.
3. Student must defend this work beforeapanel of expert examiners appointed by the university.
It take about two to three years to complete require course works, depends on whether student have master degree that relevant to his/her study or not. Then it will take at least two years to research and preparing the thesis. So I would say may take minimum fiver to achieve PhD degree.
Nowaday there are so many online and fake universities where you could buy honorary PhDs and few people in Burma are using Dr. title shamelessly…